Cisco Antananarivo Renivohitra: tsy nampianarina tampoka ny mpianatra, omaly hariva | NewsMada
Cisco Antananarivo Renivohitra: tsy nampianarina tampoka ny mpianatra, omaly hariva
Ho fitandroana ny filaminan-tsain’ny ankizy sy ny ray aman-dreny, natsahatra ny fampianarana teto amin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra omaly. Nianatra ihany anefa ny sasany.
Tampoka ny nandraisan’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena ny fanapahan-kevitra tsy hampianatra ny mpianatra rehetra teto amin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra, omaly hariva. Efa tany amin’ny 10 ora antoandro vao nahazo ny filazana ny ankamaroan’ny sekoly. Ny sasany aza nilaza ho tsy nahazo fampandrenesana momba izany akory.
Antony nandraisana ny fepetra raha ny fanazavan’ny mpampianatra sendra anay ny hitandroana ny ain’ireo ankizy sy ny mpampianatra raha toa ka sanatria misy ny sakoroka aorian’ny famoahan’ny HCC ny voka-pifidianana.
Maromaro koa ny lalana tapaka, indrindra teny amin’ny manodidina ny lapan’ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana eny Ambohidahy iny.
Ho an’ny ray aman-dreny, niolomay naka ny zanany ny antoandro. Ny sasany tonga avy hatrany haka ny zanany tany am-pianarana na naniraka ireo mpanampy haka ny ankizy hody avy hatrany na tsy mbola tonga aza ny firavana antoandro. Tao kosa ireo ray aman-dreny tsy afa nanohitra ka namela ny ankizy tany an-tsekoly ary noraisin’ny sekoly ho andraikitra ny nitazona ireo mpianatra hatramin’ny hariva.
Tsy nisy ny fiomanana ho an’ny mpaka mpianatra. Betsaka ireo ankizy misakafo any an-tsekoly ary mijanona any ny antoandro ka tsy nety nalamina intsony ny fodiana tampoka. Avy rahateo ny orana, vao maika nanano-sarotra ny fitsenana haingana ireo mpianatra.
Nioteraka fikorontanan-tsaina ho an’ny mpianatra ihany ity fampodiana tampoka azy ireo ity satria toy ny niomana avy hatrany amin’ny fisian’ny korontana izy ireo ka tsy tafandry mandry raha tsy tonga tany an-trano ny hariva.